NL (ခ) ဒီအမောင်: 10/15/14
။ အနာဂတ်ရဲ့ အသီးပုတ်လေးတွေ ။
ဘာ ဝါသနာပါမှန်း မသိ
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အကုန်လုံးတတ်သည့်
ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ထားလို့ လမ်းကြောင်းတည်ပါစေ
Posted by nllamin.com at 4:28 AM
AVD Download Video Downloader v3.3.
၀င်းလှိုင် နည်းပညာ မှ ပြန်လည်ကာ မျှဝေခြင်း ဖြစ်သာ
AVD Download Video Downloader v3.3. လေးအသစ်ထပ်တက်လာလို့ အားလုံးအတွက် မျှလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ နောက်ဆုံးထွက် အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကား သီချင်း နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေရဲ့ Videos ပေါင်းများစွာကို One click တစ်ချက်ကလေးနဲ့တင် ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်တဲ့ Downloader လေးပါ။ ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့ 5.1 MB ဖြစ်ပြီး။ ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 4:24 AM
ေ ရေရှည် တည်မြဲဖို့ကျတော့
ေ ကျော် ကွ တက်
ဆေးပေးလဲ မပြောင်းတဲ့ ဘဝနဲ့
အချိန်ဆိုတဲ့ အနောက်မှာပဲ ကွယ်ပျောက်သွား
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့် ဟာ တနေ့ ကို တစ်နာရီ ဝိပဿနာ
ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူပြီးတဲ့နောက်ကစပြီး
တစ်နေ့ ကိုတစ်နာရီ ဝိပဿနာ တရားအားထုတ်တယ်
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုတို့ငွေစာရင်းမင်းကြီး ဦးဘခင်တို့ တရားရေးဝန်ကြီး ဦးသိမ်းမောင်တို့ ဟာ
တစ်နေ့ ကို အနည်းဆုံး တစ်နာရီ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်နိုင်ကြတယ်
တစ်နေ့ ကို တစ်နာရီ တရားထိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေဟာ အလုပ်ရှုပ်လို့ 
Posted by nllamin.com at 4:21 AM
အမြန်ရောက်ဖို့ မလိုပါဘူး၊ အမှန်ရောက်ဖို့ သာလိုပါတယ်။ လူ့ သဘာဝဟာ အမြန်လိုချင်ရင် မမှန်တဲ့နည်းလမ်းတွေ တွေးလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြှင့်တင်ပြီး ယူသွားပါ။
ကလေးဘ၀ လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံးမတ်မတ်ရပ်နိုင်အောင်ကျင့်ယူ
ရပါတယ်။ ပြေးသွားနိုင်ဖို့ အတွက် ခြေတစ်လှမ်းကနေ အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်သွားရပါတယ်။
ဘ၀လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လာထိန်းပေးမမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တွန်းထိုးလှဲသွား မယ့်သူတွေသာ တန်းစီနေတယ်ဆိုတာကို သိထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့နေ့ စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတိုင်းကို သုံးသပ်မှု၊ ဝေဖန်မှု၊ ဆန်းစစ်မှုတွေနဲ့တည်တည်ငြိမ် ငြိမ် ခရီးဆက်နေဖို့ လိုပါတယ်။ လိပ်တို့ မည်သည် ပန်းတိုင်သို့ တရွေ့ ရွေ့ နဲ့ ချီတက်အောင်ပွဲခံကြပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 4:19 AM
Posted by nllamin.com at 4:17 AM
သစ်ပင်ပေါက်ကလေးတွေဟာ သစ်ပင်ကြီးတွေ အောက်ရောက်နေတဲ့အခါ အရိပ်မိပြီး ရှင်သန်ဖွံ့ ဖြိုးမှု အားနည်းသွားကြပါတယ်။ လောင်းရိပ်မိတဲ့ အရာ တော်တော်များများဟာ ရှင်သန်မှုထက် ကျရှုံးမှု များသွားတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့အတွက်လည်း လောင်းရိပ်လို့ 
ဆိုရင် လူတွေဟာ ကြောက်ရွံ့ တတ်ကြပါတယ်။
သို့ သော် မေတ္တာနဲ့ မိုးထားတဲ့ အရိပ်ကတော့ သိပ်ကို အေးမြပါတယ်။ ခွန်အားတွေလည်း မျှဝေပေးပါသေးတယ်။ မေတ္တာခြုံရင် လုံတယ်ဆိုသလိုပေါ့၊ မေတ္တာအရိပ်ဟာ အရာရာတိုင်းကိုလည်း လုံခြုံမှုပေးပါသေးတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအရိပ်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
မေတ္တာအရိပ်ကို မိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 4:16 AM
သူ့ ကိုလည်း ငါမပိုင်
ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဘယ်သူမပိုင်
အစိုးမရ အနတ္တ ပါတကား
အတု ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
Posted by nllamin.com at 4:13 AM
ေ လောကကြီးထဲမှာ ဘယ်သူမဆို
သူများဆင်းရဲ အောင် ကိုယ်ရော
စိတ် ရော မလုပ်ကြနဲ့
အနစ်နာခံစရာ ရှိရင် ကိုယ်သာခံ
Posted by nllamin.com at 4:12 AM
ဗုဒ္ဓက ငါဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ 
ငါ့ဥစ္စာ ငါ့သားသမီး ငါ့ရွှေ ငါ့မြေ
ငါ့အိမ် ငါ့ကား လုပ်နေကြတာ
သင်ပျင်းနေပါသလား။ အကယ်၍ သင် ပျင်းလည်းပျင်းနေတယ်၊ ဘာလုပ်ရ မယ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ Top 10 List က သင့်အတွက်ပါပဲ။ ဟောဒီမှာ အချိန်တွေကို ကုန်လွန်သွားစေဖို့ အားလပ်ချိန်မှာ သင်လုပ်နိုင် တဲ့အရာတစ်ချို့။
၁။ အပြင်ထွက်ပါ- သင့်မှာ တခြားဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပြင်ပ လုပ်စရာလေးတစ်ခုခု လုပ်တာလောက်ကောင်းတဲ့အရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် လမ်းလျှောက်ပါ။ ပြေးပါ။ သင် အနှစ်သက်ဆုံး ကော်ဖီဆိုင်ကို သွားးပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပါ ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်စိတ်ထဲက အမှန်တကယ် ဆန္ဒရှိတဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို လုပ်ပါ။
၂။ ဂိမ်းကစားပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ chess ကစားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုခုကို ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက် တဲ့ ဂိမ်းအခွေတစ်ခွေကို ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၊ ဂိမ်းကစားခြင်း ဟာ သင့် ကိုယ်သင် ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုရစေဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 4:09 AM
Posted by nllamin.com at 4:07 AM